Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi - FlatEarthers
Posted on January 23, 2017 by flatearthers
Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid Kurima ndiko kurima uye maberekero mhuka, zvinomera uye hunokuvadza zvokudya, faibha, biofuel, makwenzi nezvimwewo zvinoshandiswa kutsigira uye kuvandudza upenyu hwevanhu. Agriculture aiva kiyi kukura kuwedzera ndakagara dzevanhu ibudirire, apo kurima pamusoro dzaichengetwa marudzi akasika zvokudya surpluses kuti nokurerwa kukura yebudiriro. Kudzidza zvokurima rinozivikanwa zvokurima nesayenzi. Nhoroondo zvokurima yakatanga zviuru zvemakore, uye ayo kukura rave rinosundwa uye kunorondedzerwa zvakasiyana zvikuru mumamirire ekunze tsika, uye michina. kurima Industrial kwakavakirwa huru dzinotambudza monoculture kurima razova chikuru zvokurima nzira.
Modern agronomy, chirimwa maberekero, agrochemicals dzakadai mishonga yezvipembenene uye fetiraiza, uye rwokugadzira vane muzviitiko zvakawanda zvikuru yakawedzera goho kubva kurima, asi panguva imwe chete zvakakonzera kwakapararira zvipenyu nezvakazvipoteredza zvakakanganisika uye kunaka kwevanhu utano migumisiro. Vanosarudza rutoto uye echizvino vari mhuka minda kunge zvakafanana zvakawedzera goho nyama, asi vakaratidza kunetseka pamusoro mhuka vakadini uye utano zvinokonzerwa nemishonga, kukura hormone, uye nemamwe makemikari yaiwanzoshandiswa mumaindasitiri nyama kugadzirwa. Zvinoberekeswa zvakachinjwa zvipenyu zviri kuwedzera chezvinonhuwira zvokurima, kunyange zvazvo vari rakarambidzwa munyika dzakawanda. Agricultural zvokudya uye mvura zvakanaka vari kuramba achiva nyaya yose kuti vari anosimbisa gakava pamusoro dzinoverengeka fronts. Rinokosha kudzikisirana nyika uye mvura pfuma, kusanganisira Kuparadzwa aquifers, Zvakacherechedzwa mumakumi emakore achangopfuura, uye migumisiro kwepasi pamusoro zvokurima uye kurima riri kwepasi vachiri kwete aizvinzwisisa. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid
The zvikuru zvinogadzirwa okurima inogona broadly mumapoka zvokudya, fibers, rinochiwedzera, uye pakugadzira zvinhu. Dzinenge zvokudya zvinosanganisira ezviyo (zviyo), muriwo, michero, anonhuwirira, nyama uye zvinonhuwirira. Fibers zvinosanganisira donje, shinda, hemp, sirika uye neshinda. Raw zvinhu zvinosanganisira matanda uye yemishenjere. Mamwe anobatsira zvinhu vanoitwa zvinoberekwa miti, dzakadai Inogadzirwa nemasiridzi anobuda mumiti, Dhayi, zvinodhaka, zvinonhuwira, biofuels uye zvishongo zvinogadzirwa zvakadai akavezwa maruva uye chevana miti. Over chimwe muzvitatu vashandi munyika vanoshanda mune zvokurima, wechipiri chete pabasa zvekutepfenyura, kunyange zvazvo pauwandu hweavo hwevashandi okurima munyika dzakasimukira shoma yekudyidzana mumazana emakore apfuura akawanda. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid
Shoko kurima riri kunonoka Middle Chirungu kwadzakabva of Latin maatalous, kubva wechiduku, munda, uye cultura, kurimwa kana kukura. Agriculture Kazhinji rinoreva mabasa evanhu, kunyange zvazvo ari vakacherechedzawo mune mamwe marudzi kusvosve, juru uye ambrosia beetles. Kudzidzira zvokurima zvinoreva kushandisa zviwanikwa kubudisa hazvo izvo kuchengetedza upenyu, kusanganisira zvokudya, faibha, dondo zvigadzirwa, Horticultural zvirimwa, uye avo anoenderana mabasa. Tsanangudzo iyi zvinosanganisira arable kurima kana agronomy, uye horticulture, zvose okuti kuti kukura zvinomera, mhuka minda uye foresitiri. dzimwe nguva A kusiyana kukuru pakati foresitiri uye kurima, kunobva yaimbova kuti yakareba vakuru rotations, rakakura maringe ndichibvunza vakuru miitiro uye kukura zvikurukuru pachisikigo, pane murume. Kunyange ipapo, zvinobvumwa kuti pane yakawanda ruzivo kuchinjirwa uye bindepinde pakati silviculture (basa kwemasango) uye kurima. In chinyakare kurima, vaviri vari kakawanda aibatanidza kunyange landholdings duku, zvichiita kuti rokuti agroforestry.
TagsForumPertanian, KomunitasPertanian, PertanianIndonesia
Previous PostPrevious Nissan X-Trail, Mobil SUV Paling Tangguh Dan Nyaman
Next PostNext Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru